ဝမ်းစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၀မ်းစာ
Posted by Kaung Kin Pyar on Jan 21, 2015 in Creative Writing, Short Story | 40 comments
မနေ့ညနေက လမ်းလျှောက်နေတုန်း….ဘေးက အသံတိုးတိုးကြားတယ်….
အင်္ဂလိပ်ကားကောင်းတွေရမယ်၊ ရုံတင်ကားတွေ ရမယ်၊ အသစ်ထွက်တဲ့အခွေတွေ ရှိတယ်….တဲ့
လူတစ်ယောက်…ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံလေးပေါ်ထိုင်နေရင်း…..သူ့နားက ဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုလဲ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို လိုက်အကဲခတ်ပြီး ခပ်တိုးတိုး အော်နေတယ်…။ သူကသာ အဲ့ဒီလိုအော်နေတယ်….၊ သူ့ဘေးမှာရော ရှေ့မှာပါ ဘာအခွေမှ မရှိဘူးရယ်…။
ကျမ သူ့ကိုလှမ်းကြည့်တာ မြင်တော့…ညီမ ဟိုဆိုင်းဘုတ်ရှိတဲ့ ဘေးလှေကားက တက်သွားပါလို့….ပြောတယ်…။
ဘေးမှာပါတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ကလဲ
အင်း…ငါတို့လဲ အခွေငတ်နေတာကြာပြီ…၊ Shopping Mall တွေမှာတောင် အခွေတွေ မရှိတော့ဘူး၊ ကြုံတုန်း သွားကြည့်ရအောင်တဲ့…
ကျမလဲ ကြည့်ချင်တဲ့ကားလေးတွေရှိနေတော့….သူညွှန်ပြတဲ့ ဘေးလှေကားကနေ တက်သွားတယ်….။
သိပ်မတက်လိုက်ရပါဘူး……။ ပထမလှေကားတစ်ဆစ်ချိုး နေရာလေးမှာတင်….အခွေထည့်ထားတဲ့ခြင်းလေးတွေကို ပလပ်စတစ်ခုံပေါ်တင်ပြီး…အဲ့ဒီဘေးမှာ အခွေရောင်းသူ လူတစ်ယောက်ရပ်နေတယ်…..။
ကျမတို့မေးသမျှ အခွေတွေကို အမြန်ပဲရှာနေတယ်….။
အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ နီးပါး လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး မတ်တပ်ရပ်တယ်…
အခွေရောင်းနေတဲ့သူ ပျာယာတွေခတ်ပြီး…မျက်စိမျက်နှာ ပျက်ပါရောလား….၊ ရွေးလက်စ ကျမတို့အခွေကိုတောင် မရွေးနိုင်ဘဲ ဘေးနား ခပ်ရို့ရို့လေးရပ်ပြီး…ခုနက လူကြီးကို မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ လိုက်ကြည့်နေတယ်….။
ဟိုလူကြီးက ပါလာတဲ့ ဘေးလွယ်အိတ်ထဲက တစ်စုံတစ်ခုကို ထုတ်ဖို့…လက်လှမ်းတယ်….၊ အခွေရောင်းတဲ့သူ မျက်နှာပျက်သထက် ပျက်လာပါရော….
တိုက်ခန်းလှေကားကလဲ ကျဉ်း၊ ကျမတို့မေးတဲ့ ရှာလက်စအခွေကိုလဲ ရှာတာရပ်ထားလေတော့ ကျမတို့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်လဲ ဘာမှလုပ်စရာမရှိ၊ ထောင့်မှာရပ်နေရင်း အခွေရောင်းသူနဲ့ နောက်မှရောက်လာတဲ့လူကြီး ဘာလုပ်သလဲပဲ လိုက်ကြည့်နေမိတယ်…..။
ဟိုလူကြီး သူ့အိတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ဘာများလဲလို့…အခွေရောင်းတဲ့သူနဲ့ ကျမတို့တစ်သိုက်ပါ လိုက်ကြည့်မိရက်သား ဖြစ်နေတာ….။
သူ့ကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ မျက်လုံး ၄စုံက လိုက်ကြည့်နေတော့ ဟိုလူကြီးလဲ ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကို သဘောပေါက်သွားသလိုနဲ့…ရယ်သွမ်းသွေးရင်း လှမ်းပြောတယ်…
စိတ်မပူပါနဲ့ကွ…..ငါက မျက်မှန်ထုတ်တာပါ တဲ့….
ဒီတော့မှ အခွေရောင်းတဲ့အကိုကြီးက သက်ပြင်းတစ်ချက်ကြိတ်ချရင်း စိတ်အေးသွားပုံဖြစ်သွားတယ်….။ ဒါတောင် သူလှမ်းမေးလိုက်တဲ့ အသံခပ်ယဲ့ယဲ့ကို ကြားလိုက်သေး….
(အဲ့ဒါ ဘယ်နားမှာလဲလို့တော့ … မမေးနဲ့….၊ လုံး ၀ မ ပြော ဘူး..)
အများရှေ့မို့ မပြောချင်လဲ နှစ်ယောက်ဆုံတဲ့အခါ တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် ပြောပေးနော် ကျွန်တော်လဲ လမ်းကြုံရင် ၀င်ဝယ်ချင်လို့ပါ။
ငင့်..လေးခက မန်းလေးက ဟုတ်ဝူးလား…???
ကောင်းကင်ပြာနဲ့က ကြုံတတ်ပါတယ်..အိုက်ဆိုင်နဲ့က လမ်းသင့်တယ်….၊ လိုချင်တဲ့အခွေရှိရင် ပြောလေ လေးခ။ ၀ယ်ထားလိုက်မယ်….၊ အခွေစာရင်းပေးထားလိုက်…
အကြည်၊ စာတမ်းထိုးလဲ အမှန်ပဲ….(ကြော်ငြာပေးတာ…)
တာရာမင်းဝေရဲ့ မြင်းစီးထွက်သော အိပ်မက်များကို
.မောင်သူရ(Oo Zarganar)က ရုပ်ရှင်တစ်ကားအဖြစ် အသက်သွင်းဖူးတယ်။
ကောင်းကင်ပြာတော့ လျှာမပေးနိုင်ဘူး…။ ဒီလျှာလေးနဲ့ အတင်းတုတ်နေရဒါ…
ညဲဟာညဲ လျှာစားချင်ရင် ၀က်သားတုတ်ထိုးဆိုင်သွား….။
အိုက်ကားက လမ်းဘေး ရောင်းတတ်လို့လား….။ တိုးတိုးတိတ်တိတ်တွေနဲ့ မေးဘာအေ…။ ဒါမျိုးက ရှားဒယ်…၊
လျှာကြည့်အူးမယ်….။ တွေ့ရင် သံချောင်းခေါက်လိုက်မယ်…
မန်းမှာတော့ အဲလိုဟုတ်ဘူး ဆိုင်ခန်းနဲ့ အခွေတွေ စီကာရီကာ စင်တွေနဲ့ကို ထားပြီးရောင်းနေသေးလို့ ၀ယ်လို့လွယ်နေစဲပါဗျ။
ကောင်းကင်ပြာ လိုချင်တဲ့အခွေ ၀ယ်ပေးမယ်ပြောလို့ ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်က လုံး ၀ မ ပြော ဘူး လို့ရေးထားလို့ စတာပါ။
ဒါဆို လေးခဆီက ပြန်မှာမယ်……
bluray စစ်စစ် လိုချင်လား
မြန်မာလို စာတမ်းထိုး ပါချင်လား
dvd9လား
အဲ့လာ မန်းလေးလို့ ခေါ်တယ်
P.S online ပေါ်ကနေ လိုင်းမကောင်းလို့ မဒေါင်းနိုင်ဘူးလား ရတယ်။ လုံးဝ 1080p video file ရောင်းနေတာတွေတောင် ရှိရဲ့
မန်းသား မန်းအကြောင်းကြွားတာ ဆန်းသလားကွယ်
တဂျားလေး မမဂျီး ခွေစာရင်းမတ်စိပို့လိုက်မယ် ၀ယ်ပေးနော် ခေး
လေသံက သာမန်ထက်ကို လွန်လွန်ကဲကဲ ချိုသာနေပါလားဟင်
အိုဇာဝါ မာရီယာ ရယ်​
အူးလေးမှာ ရှိလား ကျွန်တော် လာကူးချင်လို့ ဟီဟိ..။
Whoopi Goldberg နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ မင်းသမီးပါတဲ့ကား…Lucy ဆိုတာလားတော့ တွေ့မိတယ်…
နှုတ်​ခမ်းထူထူ နဲ့ သိပ်​ ကျက်​သ​ရေရှိတဲ့မင်းသမီးပါဗျာ
ဟိုဘက်မှာလဲ ဒါတွေ ရေးထားတယ်။
မောင်ဂီ ဘာရောဂါထနေပြန်ပြီမသိ။ :))
အဲဒီလူကြီးက ရွာထဲ က ဦးလေးကြီး တွေထဲ က ဖြစ်နေဦးမယ်။ lol:-))
အဲ့မှာ အင်တာဗျူး ခွေ ရော ရသတဲ့လား။
အဲဒီမှာ အလကားပေးတောင် ကိုရီးယားကား တွေ လောက် စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်။
English ကား ကောင်းကောင်းကြည့်ချင်တာ အရီးရ…။ မြန်မာကားတွေကလဲ ပေါတောချာတာ အက်ကြောင်းထပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအစကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဆုံးကို တန်းသိနေရောလား….။
အင်္ဂလိပ်ကားကို ခိုးကူးခွင့်မပြုလို့…အော်ရီဂျင်နယ်ရှာပြန်တော့လဲ Shopping Mall ကြီးတွေမှာတောင် အရင်ကရှိသေးတယ်၊ အခုမရှိတော့ပြန်ဘူး။
၄၂ လမ်းထိ သွားဖို့ကျတော့လဲ…ကောင်းကင်ပြာအနေနဲ့က တကူးတကဖြစ်တယ်…။
ဒယ်ဒီဖားသားပါးပါးဖေဖေရယ်….သာမီး အိမ်မှာ..စကိုင်းမဲလေး တပ်ဗျဇီ…ပြောတာကို နင်တို့ TVရှေ့က ထ မှာမဟုတ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်တောင် အတပ်မခံလို့…အဖေတောင်ကြီးက ပြန်မလာခင် ခိုးတပ်ရကောင်းမလား ကြံစည်နေတာ..
ရွာပေါ်က ဟိုလူကြီးဒီလူကြီးတွေက ဟိုကားလေးတော့ကောင်းတယ် ဒီကားလေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုရင် ကျိချင်တာ တပိုင်းသေပြီး တရွတ်ဆွဲ…။ ဘယ်ကရှာရမှန်းလဲ မသိ…
မနေ့က သမိုင်းကဖြတ်တော့ လမ်းဘေးမှာပေါ်တင်ပဲ ခြင်းတွေထဲထည့်ပြီးရောင်းနေတာ ၃ ၄ဆိုင်မက…။ ဟင်….ဘိုလိုကြီးမှန်းမသိ…၊ ဒီအပိုင်းက စက်ကွင်းလွတ်တာလား၊ ရန်ကုန်တမြို့ထဲတောင် စီမံချက်က ကွက်ကြားမိုးရွာတယ်ထင့် လို့တွေးလိုက်သေးတယ်…
ဟော…မနက်ကျတော့ ဖယ်ရီပေါ်က မှုခင်းဂျာနယ်လေးလှန်လိုက်တာ ကျောက်တံတားမှာ…အခွေလေး ၅ခွေသာ ခမျာရောင်းရရှာပါသေးတယ်…၊ ပိုက်ဆံလေး ၃၀၀၀ လားရသေးတယ်…၊ ရဲကိုကိုတို့က ကုတ်သွားလို့ ဂျာနယ်ထဲ ပါလာတယ်….
အင်တာဗျူးအခွေက စာတန်းထိုးအမှန် အကြည်တွေနဲ့ အနော်တောင်ကျိပီးတာကြာပေါ့ ရတာပေါ့အရီးရယ် ညန်မာအစိုးရဥပဒေကို မကြောက်တာ လမ်းဘေးခွေရောင်းသမားတွေပဲချိ… အဖမ်းခံရတာနောက် မရောင်းရရင် အယင် ထမင်းငတ်မာလေ…
ကင်းကောင်လေး ပေါသလို ၀မ်းစာ
-ယင်းဂလိပ်ကားဒွေကို…ခိုးကူးမို့လို့ ဆိုပီး..ဖမ်းတာ သိမ်းတာတေ လုပ်ခိုင်းတဲ့ -သူဒွေကို..သိပ်သောက်ညင်ကတ်တာဘဲကွီ..
ဒဂယ် ဖမ်းသင့်တာဒွေကိုဒေါ့ လွှတ်လွှတ်ပေးပြီး…ဒဂယ် မ၀င်သင့်တဲ့လူဒွေကိုဒေါ့ ၀င်ခွင့်ပေးပြီး မရှိလို့လုပ်စားနေတဲ့သူဒွေကိုဒေါ့…ပုံကြီးချဲ့ပြီး ပတ်တနာလိုက်ရှာတာ…
ပြောနဲ့ နေရာ သိပြီ….
ဟဲဟဲ…. ကြုံရင် သွားဝယ်မလို့ပါ…
သများထမင်းအိုးတော့ တုတ်မထိုးချင်ပုစ့်….။ သို့သော်…သမိုင်းက အခွေတွေများ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ မှားမယ်လို့….
ကာဗာနဲ့ အခွေက တခြားစီဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်၊ မဟုတ်ရင် အခွေက ၀ါးတားတားဖြစ်မယ်…၊ အိုက်လိုမှမဟုတ်ရင် အင်္ဂလိပ်စာတန်းမထိုး မြန်မာစာ တလွဲဖြစ်တယ်…။
အဲ့ဒီမင်းသားရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို သဘောကျတယ်..။
သူပါတဲ့ LAGAAN ဇာတ်ကားကို မကြည့်ဖူးသေးဘူး…
PK ဇာတ်ကားလဲ အတော်လေးကို ကောင်းတာပါ….။
ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း သူပြောတာလဲ ဟုတ်တာပဲလို့ တွေးမိတာ ခဏခဏ
ထိုင်းကလူတွေက လမ်းကြုံရင် တာချီလိတ်မှာ အခွေလာဝယ်တယ်…
ယိုးဒယားစာတမ်းထိုးအခွေ အကုန်ရပြီး ဈေးသက်သာလို့တဲ့…
သူတို့ဆီမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ၊ ရဲက ဖမ်းတယ် ငွေညှစ်တယ်…
“ဝမ်းစာ” ဆိုလို့ … ဦးကျောက်စ်ကတော့ ဝမ်းစာမဟုတ်… သရီးစာ ရှာနေရဘီ…
သူများဝမ်းစာနဲ့ကြုံတုန်း သူ့သရီးစာကို လာကြွားနေတယ်။
နောင်ဆို ဖိုးစာ ဖိုက်စာပါ ရှာရမှာ။
ဖမ်းတာက တကယ်လိုအပ်တာဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာတပြည်လုံး ဖမ်းပေါ့လေ…။ ခုက ရန်ကုန်ချင်းအတူတူတောင် တစ်နေရာက ခိုးရောင်း၊ တစ်နေရာက အဖမ်းခံရ…ဟော့…နောက်တစ်နေရာကျ ပလက်ဖောင်းတင် ပေါ်တင်ရောင်းတာ….။ အိုက်ဒါ သွားရလှ ဘက်စ်ကားမှတ်တိုင်လေး ၆ ခုစာလောက်နေရာတွေ…
ပြီးတော့…ခုဟာက ဖမ်းလိုက်ပဟဲ့တစ်လ၊ ပြီးတော့လဲ အလျိုလျိုဆိုင်လေးတွေ ပြန်ပေါ်လာတာပဲ…။ ရောင်းတာချင်းအတူတူ ကံမကောင်းသူမောင်ဖေတွေကတော့ ဂျေးထဲရောက်၊ ဂျာနယ်ထဲရောက်ပေါ့…။ မညီမျှတာပြောပါတယ်….။
သရီးစာက ရှာချင်စရာလေးတွေပါ…အူးကျောက်စ်ရယ်။ မနှင်းကလဲ ချောချောလေး…၊ လာတော့မယ့်ရွာ့အသီးကျော် ဖြစ်မှာလေးကလဲ အဖေတူဆို ခန့်ခန့်၊ အမေတူဆို ချောချောဆိုတော့….
သွားရမှ ဘတ်စ်ကားလေး ၆ မှတ်တိုင် ဆိုတော့ကာ လှည်းတန်း ပဲ ဖြစ်ရမယ်… ဒန်တန့်ဒန်….
ဆက်စပ်စဉ်းစားတာတွေ သိပ်များနေပြီ ကိုစံအာဂ…
လော့ကျတဲ့ကျလိကျလိအိမ်မှာ… တချို့လူတွေ(အဓိကအားဖြင့်အမဲတွေ) အဲလိုဒိုင်လေးနဲ့အခွေရောင်းသဗျ..
တခါတလေ.. မက်ခ်ဒေါ်နယ.်ထဲထိဝင်ပြီး.. စားနေတဲ့သူနားကပ်မေးတယ်..။
ပြောရရင်.. အဲဒီလိုအခွေရောင်းနေတာတွေက.. ဟောလိဝုဒ်နဲ့၁၀မိုင်တောင်မဝေး..။
မျက်စိအညောင်းခံကြည့်ရမယ့်အတူတူ.. ကောင်းတာပဲအရသာရှိရှိကြည့်.. အနုပညာခံစားမယ်ဆိုပြီး.. မ၀ယ်ဖြစ်..။
အဲ.. မရှိတာတွေတော့.. ၀ယ်ထားပါ့..။
ဒါရိုက်တာ Hayao Miyazaki ရဲ့အဲနီမေးအခွေတွေကိုကြိုက်သမို့.. အီးဘေးကနေ.. မလေးရှားကိုလှမ်းမှာဝယ်တာ…
သဂျီးတို့ တိုင်းပြည်မှာလဲ ဒါမိုးတွေရှိတာပဲလား…..။
တခါတခေါက်တော့ မြန်ကျန့်ကို ပြန်လာပြီး မြန်ကျန့်ပြည်ကြီး ဘာတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာ လာကြည့်ဘာအူး….
TV ကလာတဲ့ မြန်မာအခန်းဆက်အက်ရှင်ကားထဲမတော့ ထိုင်းကပြန်လာတဲ့ အေးမြတ်သူက လေဆိပ်မှာ ဦးထုပ်ကြီးဆောင်းလို့ မျက်မှန်နက်ကြီးတပ်ပြီး သြော် မြန်မာပြည်ကြီးတောင် အတော်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါလားဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ချသံကြားတော့ သဂျီးတို့မြန်း ပြန်လာရင် ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးမယ် စဉ်းစားမိသေး….
အဲ့ ဟို အ​ခွေ​တွေ​ကောရှိလားဟင်​ ! လက်​ပံ​တောင်း ပြဿနာတို့ မိတ္ထီလာ အဒိကရုံးတို့ လက်​ပံ​တောင်း ​သပိတ်​တို့ ​ပြောဒါ
အခွေမကျိနဲ့ ကိုယ်တိုင်သွားကျိပါလား ဆြာနီ..
​သွေးရဲရဲ သံရဲရဲ မကြည့်​ရဲလို့ ဆရာဝံ မလုပ်​ခဲတာ ။
ဒီရက်ပိုင်း ပြန်ရနေပြီကော… နော်…
ဆြာနေ….ဘုန်းကြီးအရေးအခင်း ကြည့်ပြီးကတည်းက စိတ်ထိခယှက်လို့…အရေးအခင်းဗွီဒရိုဒွေဆို အင်တာနက်မှာ တွေ့တောင် လက်ရှောင်ဖြစ်နေတာ…။ သာမီးက အတဲငယ်ဒယ်…ငိငိ..
ဟုတ်တယ် အမွန်…. ဒီရက်ပိုင်း ပြန်တွေ့နေတယ်..။ Center တွေမှာလဲ တွေ့နေရပြီ….။ စိတ်ချမ်းသာချက်….။
သူခိုးအားပေးတယ်ပဲ ပြောပြော….သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ၀င်းဝင်းဖြစ်တယ်လို့ ခံစားမိ….